Ụbọchị My Pet » Olee otú Iji Mkpapụ A Girl na-egosi Little Mmetụta
site Ekwusa Hillard
emelitere ikpeazụ: Sep. 26 2020 | 2 min agụ
Ọ bụrụ na ị na-akpa otu nwa agbọghọ onye na-egosi obere n'anya ị pụrụ ịnwa nditop ke towel. I nwere ike na-ahụ otu mgbe niile na-ebute ahụ kọntaktị dị ka ịmakụ, cuddling, ma ọ bụ kissing. Ezie na ọ bụ na-anabata gị ngosipụta nke ịhụnanya, ọ na o yiri ka iru ala wetere ndị a mmegharị na ya onwe ya. Ọ bụrụ na ị achọpụtara a gị na ụbọchị na ya nsogbu gị, -eme ihe ugbu a iji na-ezere erughị ala na mmekọrịta gị.
Kọwaa Mmetụta Gị
Ọ dị mkpa ịghọta na enyi gị nwanyị nwere ike ọ bụghị na-agụ gị uche na nwere ike enweghị echiche otú ya na omume na-emetụta gị. Mmekọrịta ọkachamara, Dr. Karen Sherman na-emesi ike na ọ dị mkpa ịgwa enyi gị nwanyị otú ị na-eche. Ikekwe, ya unaffectionate omume hapụrụ gị jụrụ, anya ya, nkụda mmụọ, ma ọ bụ ọbụna ekwesighi. Ihe ọ bụla ọ bụ, sere ya iche maka a dị oké njọ mkparịta ụka na-ekwusi okwu otú omume ya na-emetụta gị.
Jụọ maka Nzaghachi
Mgbe i mere ka mmata na ihe nye gị nsogbu, ọ bụ oge igwu miri. Jụọ ajụjụ iji nyere aka chọpụta ihe kpatara enyi gị nwanyị si akpa àgwà. Ọ pụrụ ịbụ na na aga na mmekọrịta nke ya na ụbọchị achọghị ka a otutu mmetụta ịhụnanya. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na mmekọrịta gị bụ ka pụtara ọhụrụ, ọ nwere ike dị mkpa karịa oge emesapụrụ gị na-achọ n'aka nke mmekọrịta. Ozugbo abụọ n'ime ndị ị na pinpointed ekwe omume ihe mere ya na enweghị ịhụnanya nke, kwurịta ndị ma nke i nwere ike inwe mkpa gị zutere.
Bụrụ Onwe Gị
Cheta, ị kwesịrị ị na igosipụta mmetụta gị na enyi nwanyị n'ụzọ na-abịa ndammana ị, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dịghị megwara ha. Na ya n'isiokwu "10 Njirimara Ukwuu mmetụta ịhụnanya Ndị mmadụ", Dr. Kory Floyd depụtara ọtụtụ uru ndị na-egosi mmetụta ịhụnanya dị ka inwe ùgwù onwe onye, obere egwu na-akpachi anya, ukwuu resilience nrụgide. Ọzọkwa, na-eme nnyocha Andrew Gulledge, Michelle Gulledge, na Robert Stahmann gosiri na anụ ahụ n'anya enwekwu mmekọrịta afọ ojuju ma mmekọ. N'agbanyeghị gị enyi nwanyị na enweghị ịhụnanya nke, gị onwe gị openness na-egosipụta mmetụta ịhụnanya-enye gị ohere jirichaa na ndị a dị mma esi na-enwe mma mmekọrịta n'ọdịnihu.
Mee Siri Mkpebi
Ọ nwere ike na-abịa a mgbe mgbe ị na-aghọta na, n'agbanyeghị na unu enyi nwanyị mgbalị kasị mma, na ị ka na-enweghị afọ ojuju na mmekọrịta. Dr. Sherman na-ekwu na ihe dị mkpa na ihe ọ bụla na-enwe mmekọrịta na-amụta na-anabata ibe iche. Ọ bụrụ na ị na-ahụ na enyi gị nwanyị si na enweghị ịhụnanya nke na-aga n'ihu inye gị nsogbu, o nwere ike ịbụ ihe kasị mma na-akwụsị ndị mmekọrịta ji obi ụtọ na-ahụ onye pụrụ mezuo gị mkpa maka ịhụnanya.